Bhuku Rekutanga reMakoronike 13:1-14
Areka inotorwa kuKiriyati-jearimu (1-14)
Uza anorohwa ofa (9, 10)
13 Dhavhidhi akataura nevakuru vezviuru nevemazana nevatungamiriri vese.+ 2 Dhavhidhi akabva ati kuungano yese yaIsraeri: “Kana zvakanaka kwamuri uye kana zvakanaka kuna Jehovha Mwari wedu, ngatitumirei shoko kuhama dzedu dzakasara munzvimbo dzese dzeIsraeri uyewo kuvapristi nevaRevhi vari mumaguta avo+ ane mafuro, kuti vauye vazobatana nesu. 3 Uye ngatidzosei Areka+ yaMwari wedu.” Nekuti vakanga vasingaichengeti zvakanaka mumazuva aSauro.+ 4 Ungano yese yakabvumirana nazvo, nekuti vanhu vese vakazviona sezvakanaka. 5 Saka Dhavhidhi akaunganidza vaIsraeri vese kubva kurwizi rweIjipiti* kusvika kuRebhohamati,*+ kuti vanotora Areka yaMwari wechokwadi kuKiriyati-jearimu.+ 6 Dhavhidhi nevaIsraeri vese vakakwidza kuBhaara,+ kuKiriyati-jearimu yeJudha, kuti vanotora Areka yaMwari wechokwadi, iye Jehovha, uyo agere pachigaro cheumambo pamusoro* pemakerubhi,+ panoshevedzwa zita rake. 7 Asi vakaisa Areka yaMwari wechokwadi mungoro itsva+ uye vakaibvisa kumba kwaAbhinadhabhi, uye Uza naAhiyo ndivo vaifambisa ngoro yacho.+ 8 Dhavhidhi nevaIsraeri vese vakanga vachipembera pamberi paMwari wechokwadi nesimba ravo rese, vachiimba nziyo, vachiridza udimbwa, nezvimwe zviridzwa zvine tambo, nematambureni,+ nesimbi dzinorovaniswa,+ nemabhosvo.+ 9 Asi pavakasvika paburiro* raKidhoni, Uza akatambanudza ruoko rwake akabata Areka yacho, nekuti yakanga yava kudonhedzwa nemombe. 10 Jehovha akabva atsamwira Uza zvikuru, uye akamurova nekuti akanga atambanudzira ruoko rwake kuAreka,+ uye akafira ipapo pamberi paMwari.+ 11 Asi Dhavhidhi akatsamwa nekuti Jehovha akanga aratidza hasha dzake kuna Uza; uye nzvimbo iyoyo inonzi Perezi-uza* nanhasi. 12 Saka Dhavhidhi akatya Mwari wechokwadi pazuva iroro uye akati: “Ndichaunza sei Areka yaMwari wechokwadi kuguta rangu?”+ 13 Dhavhidhi haana kuunza Areka yacho kwaaiva kuGuta raDhavhidhi, asi akaita kuti iendeswe kumba kwaObhedhi-edhomu wekuGati. 14 Areka yaMwari wechokwadi yaiva kumba kwaObhedhi-edhomu uye yakaramba iri ikoko kwemwedzi mitatu. Jehovha akaramba achikomborera imba yaObhedhi-edhomu nezvese zvaaiva nazvo.+
^ Kana kuti “kubva kuShihori yeIjipiti.”
^ Kureva kuti “Kuputikira Uza Nehasha.”